Labels: ကဗျာ 1 comments
စက္ကူလှေပေါ်မှာ စာလုံးနက်နက်ဖြင့် ရေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကို သိလာကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်၏။
ညဉ့်အချိန်မှာတော့ ကမ်းကို ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု
ဖြူဆွတ် ရွေ့မျောနေသော တိမ်ရွက်များကို
ကျွန်တော်နှင့်ပြိုင်ရန် ကျွန်တော့် စက္ကူလှေများနှင့်ပြိုင်ရန်
ထိုသို့ပင် အတွေးနှင့် အိပ်ယာဝင်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အချိန်မှ စတင်ပြီး သူ လာခဲ့ပါသနည်း။
သူ့ကို ကျွန်တော်မမြင်အောင် သိုဝှက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့။
လေမှာစီးပျံ့သော ချစ်သူရနံ့ကို သန့်သန့်ကလေး
ထိုညသည် မေလ ညတစ်ညဖြစ်၏။
ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်ရေ နှလုံးသားနိမိတ်ပုံများသည်
ဖမ်းဆုပ်ကိုင်တွယ်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားသော်လည်း
ကျွန်တော်သည် မရနိုင်တာကို ရှာဖွေပြီးသည့်နောက်
ချစ်သူ နှလုံးအိမ်ကို ရုန်းကစေမည်ဆိုလျှင်
သူ့မျက်နှာမှ အဝေးသို့ ဖယ်ခွာပေးပါမည်။
ချစ်သူသည် သွားလမ်းမှာ ပင်ပမ်းရသည်ဆိုလျှင်
အခြားလမ်းမှ ကျွန်တော် လျှောက်ပါမည်။
သူ ပန်းတောမှ ဝေးရာသို့
လှိုင်းတို့ဖြင့် တိမ်းမှောက် ပျို့အန်စေသည်ဆိုလျင်
ကျွန်တော့် လှော်တက်ကို လွှတ်ချလိုက်ပါမည်။
ကျွန်တော် ကွယ်ကာ ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အတွက် ရေကာတာ တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့၏။
ဤစောင်းကား မတတ်မြောက်သော ဂီတကို
ကြေကွဲ လှိုက်မောဘွယ်ရာ ကာလများသည်
ကျွန်တော့်မှာသာ ရင့်ရော်သော ပန်းတစ်ဆုပ်နှင့်
သင့်အကြည့်တို့က ဘယ်ဆီမှာ စိုက်ဝင်နေသနည်း။
အရိပ်တို့လည်း မြေဆီမှာ ညွတ်တွားကြပြီ။
ချောင်းသို့သွား၍ ခရားတွင် ရေဖြည့်ရန်
ချောင်းရေ ဂီတမှုန်ရီကို ခုံမင်နေ၏။
နေ ရွှေခြည်မျှင်ထဲသို့ တိုးဝင်ရန် ခေါ်နေ၏။
လာသူ သွားသူတို့ မရှိကြချေ။
မြစ်ထဲမှာ လှိုင်းတွေ ဝေ့လိပ်ချီကြွနေ၏။
မည်သူနှင့် ဆုံတွေ့ခွင့် ရနိုင်မည်ကိုလည်း
ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်သော့ကို ပြန်ပေးခဲ့ပါပြီ။
လောကကို သင့် ခြေတော်ရင်းမှာ
ကျွန်တော် ... ဦးနှိမ်ချပါ၏။
(ဆရာတာရာမင်းဝေ ရေးတဲ့ “ငါ့ရင်ခွင်ကြားက နှင်းဆီဓားသွားတစ်လက်” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲက ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့လာသူ မဝေလင်းကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။)
သူ့ကို စသိတာ ပြည်မြို့က မြေစိုက် စာအုပ်အငှားဆိုင်ကလေးမှာ ဖြစ်သည်။ ‘ကြယ်သီချင်းနဲ့ လမင်းသံစဉ်’ လုံးချင်းစာအုပ်ကလေးကနေ စသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့နာမည်၏ ထူးခြားမှုနှင့် စာအုပ်အပြင်အဆင်က ပထမဆုံး ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆောင်သည်။ နောက်တော့ သူ့စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် ကျွန်တော် ဖတ်ဖြစ်လာသည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ သူ့စာအုပ်က တစ်အုပ်မက သုံးလေးအုပ်။ ကျွန်တော်က သူ့စာအုပ်တွေကို စထွက်ထွက်ချင်းကတည်းက ဖတ်မိသူမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ထွက်ပြီးသား မဖတ်ရသေးသော သူ့စာအုပ်တွေကို ရှာဖတ်ရသည်။ အသစ်ထွက်မည့် စာအုပ်များကိုလည်း အငှားဆိုင်ရောက်တိုင်း မေးရပြန်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော့် အသက် ၁၇ နှစ်။ သူသည် ကျွန်တော့်အပေါ် ကာလအတော်ကြာအောင် လွှမ်းမိုးထားခဲ့သည်။ ထိုနှစ်များအတွင်း ကျွန်တော်ပြောသော စကားအများစုတွင် သူ့ဝတ္ထုများနှင့် သူ့ဇာတ်ကောင်တို့၏ အတွေးအခေါ်များက ဘေးလူ အမြင်ကတ်ရလောက်အောင် နေရာယူခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအချိန်က ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်ထုသည် သူ့ဇာတ်ကောင်များ၏ ထူးခြားသော အယူအဆများနှင့် ကင်းလွတ်သူမရှိ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း သူ့ဝတ္ထုများအပေါ် နားလည်ခြင်း နားမလည်ခြင်း အသံများက ပွက်လောရိုက်နေပြန်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူသည် စာပေအနုပညာနှင့် ပတ်သက်လာရင်တော့ နတ်ဘုရားငယ်တစ်ဆူ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆထားသည်။ `မိုးခေါင်လို့တီးတဲ့ ဗုံသံ´ ကဗျာစာအုပ်ကို ကျွန်တော် သန်လျင်မှာ အေဂျီတီအိုင်တက်နေစဉ် သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ဆီကနေ ငှားဖတ်ခွင့်ရသည်။ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်မရတော့သောကြောင့် ထိုစာအုပ် တစ်အုပ်လုံးကို ကျွန်တော် မိတ္တူကူးယူထားခဲ့သည်။ နောင်နှစ်တွေကြာသောအခါ ထိုစာအုပ် ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထွက်ရာ ကျွန်တော် ထပ်မ၀ယ်ဖြစ်တော့။ သူ့ကဗျာအများစုကို ကျွန်တော်ကြိုက်သည်။ သူ၏ လူသိပ်မသိသော လုံးချင်းအဖြစ် မထုတ်ဖြစ်ခဲ့သော မဂ္ဂဇင်းကဗျာများကိုလည်း ကျွန်တော်ကြိုက်သဖြင့် ကူးယူသိမ်းဆည်းဖြစ်သည်။ ၀တ္ထုဖြစ်စေ ကဗျာဖြစ်စေ သူက ထူးခြားစွဲမက်ဖွယ် ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် ရေးဖွဲ့နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ရိုးသားမှုကိုတော့ အမြဲတမ်း နောက်ခံထားတာ တွေ့ရတတ်၏။
( ၂၀၀၃ ) ခုနှစ်မှာ သူနှင့်ကျွန်တော် လူချင်းဆုံခွင့်ရသည်။ `ကြယ်ကိုးစင်းနဲ့ လင်းတဲ့ကောင်းကင်´ စာအုပ်ထွက်ရှိပြီးစဉ်က ဖြစ်သည်။ ထိုစာအုပ်တွင် သူနှင့်ကျွန်တော်အပါအ၀င် တခြားစာရေးဆရာ ( ၅ ) ယောက်လည်း ပါဝင်ရေးဖွဲ့ထားကြသည်။ ထိုစဉ်က သူ့အိမ်မှာ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကျောက်ရေတွင်းမှာ ဖြစ်သည်။ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သည့် အနီရောင်ဘက် အနည်းငယ်ပါသော နှစ်ထပ်တိုက်ကလေး။ အမှန်က သူနှင့်တွေ့လောက်စရာအကြောင်း ကျွန်တော့်မှာ ဘာမှမရှိ၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေသူ စန်းမွန်အောင် ( မြေမှုန်လွင် )နှင့် အဖော်အဖြစ်လိုက်ရင်း သူ့ကို တွေ့ဖူးရုံလောက်သာ။ ကျွန်တော်တုိ့ရောက်တော့ လတ်တလော ထွက်ရှိပြီးသား သူ၏ လုံးချင်းစာအုပ်ပုံကြီးကြားမှာ ထိုင်ကာ ကျွန်တော်တို့ သူနှင့်စကားပြောကြသည်။ သူနှင့် စန်းမွန်အောင်တို့ ပြောကြတာဆိုလျှင် ပိုမှန်မည်။ ကျွန်တော်က ဘေးမှနေ၍ သူတို့ပြောသမျှ ထိုင်နားထောင်ရုံသက်သက်။ ထိုကတည်းက သူ့ကိုကြည့်ရသည်ကို ကျွန်တော် အားမရ။ သူက ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလို ပုံစံမျိုးမဟုတ်။ သူ့ဇာတ်ကောင်တွေလိုမျိုး သူ့ကို ရင်းနှီးကြည့်လို့မရ။ သူက အနေတည်လွန်းသည်။ အပြုံးအရယ် မရှိ။ နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ဖြစ်ချင်သည်ဟု အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူပြောဖူးပေမယ့် သူ့မှာ ဘောလုံးသမားလို ကြံ့ခိုင်မှုမျိုး မတွေ့ရ။ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပျောက်နိုင်သော ရင်တွင်းဒဏ်ရာတစ်ခု ရထားသူတစ်ယောက်၏ ခံစားချက်မျိုးကိုသာ သူ၏ သာမန်ထက် နည်းနည်းပိုရောင်နေသည့် မျက်နှာပေါ်တွင် တွေ့ရ၏။ တစ်ကြိမ်မှာတော့ သူက စာအုပ်ကို ကိုင်ကြည့်ရင်း စာရေးဆရာနာမည်တွေ ရွတ်သည်။ ကျွန်တော့်နာမည်ရောက်တော့ သူက ထပ်ကျော့ကာ သုံးကြိမ်လောက် ပြန်ရွတ်နေသည်။ ပြီးမှ `လွန်းဆက်နိုးမြတ် ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်း´ ဟု စန်းမွန်အောင်ကို လှည့်မေးသည်။ စန်းမွန်အောင်က ကျွန်တော့်ကို ပြမှ သူ ကျွန်တော့်ကို အံ့သြစွာ ကြည့်သည်။ ထိုအချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်ကဗျာ မဂ္ဂဇင်းမှာ လေးပုဒ်သာ ဖော်ပြခံရသေးသည်။ ထို့ပြင် အခုချိန်လိုမျိုး ကျွန်တော်နှင့် နာမည်ဆင်တူ စာရေးဆရာများလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိသေး။ ဒါက သူနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမှု။
သည်လိုနှင့် တမေ့လောက်ကြာသောအခါ သူ့ဆီကို စန်းမွန်အောင်နှင့်ပဲ ထပ်ရောက်ဖြစ်ပြန်သည်။ သည်တစ်ခါလည်း သူနှင့်ကျွန်တော် စကားမပြောဖြစ်။ စန်းမွန်အောင်နှင့်သာ အလုပ်အကြောင်း ပြောကြဆိုကြသည်။ သည်ကြားထဲ စန်းမွန်အောင် စီစဉ်ထုတ်ဝေပေးမှုကြောင့် သူနှင့်ကျွန်တော်တွဲကာ စာအုပ်တွေ ထွက်ခဲ့သေးသည်။ တစ်အုပ်က သူရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဦးမင်းလူ(မင်းလူ)ရယ် `ကြယ်စုံသစ်ပင်´။ နောက်တစ်အုပ်က သူနှင့်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်း `ဆံပင်အလယ်ခွဲနဲ့ နက္ခတ်´။
သူ့အကြောင်းတွေးသည့်အခါ ကိုကျော်စိုး (မင်းခိုက်စိုးစန်)၊ ကိုရဲကြီး (သစ္စာနီ)၊ နေမျိုး၊ ဦးမင်းလူ (မင်းလူ)နှင့် ကိုရဲဝင်း (နီကိုရဲ)ကိုလည်း တွဲပြီး သတိရမိတာ ကျွန်တော့်အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ ထိုစာရေးဆရာများထဲမှ နေမျိုးတစ်ယောက်သာ ကျွန်တော်မဆုံဆည်း မရင်းနှီးမိသော်လည်း ကျန်လူများမှာ ကျွန်တော်နှင့် အနည်းငယ်စီ ရင်းနှီးကြသည်။ စာပေလောကမှာ သူနှင့် ကိုကျော်စိုးက ယှဉ်တွဲ၍ လူသိများသည်။ ငြိမ်းအေးအိမ် ထုတ်ဝေသော အရင်က သရဖူမဂ္ဂဇင်းမှ စတင်ကာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို စာပေလောကက ယှဉ်တွဲလိုက်ကြခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ကိုတင်ကိုအောင်၏ အရင်က ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင်တော့ သူ့ကို နေမျိုးနှင့် မကြာခဏ ယှဉ်တွဲဖော်ပြခဲ့တာ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အကြောင်းတွေးမိရင် နေမျိုး ပါလာတတ်တာဖြစ်မည်။ ကိုရဲကြီးကတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့နှင့် စကားပြောရာတွင် ရွှေဘုန်းက… ရွှေဘုန်းက ဟုဆိုကာ သူ့အကြောင်းတွေ ပြောပြတတ်၏။ ကိုရဲဝင်းသည်လည်း သည်အတိုင်း၊ ဦးမင်းလူလည်း သည်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ရွှေဘုန်းက… ရွှေဘုန်းက နှင့် တဖွဖွပြောကာ သူ့ကို ချစ်ကြခင်ကြသည်။ အမှန်က ထိုပုဂ္ဂိုလ်များတင်မဟုတ် စာပေတစ်လောကလုံးက သူ့ကို လေးစားချင်ခင်ကြ၏။ သူ၏ `ပြိုင်မြင်းတို့၏ ခွာသံ´နှင့် `နတ်ဖုရားရုပ်တု´ စာအုပ်များသည် စာပေလောကအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အတွေးအခေါ် ဆောင်းပါးများပဲ ဖြစ်သည်။ သူသည် တချို့စာရေးဆရာ၊ ဝေဖန်ရေးဆရာများနှင့် ၀ါဒရေးရာတိုက်ပွဲများကို မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဆင်နွှဲခဲ့ဖူးသည်။ ဒါသည် သူ၏ စာပေလှုပ်ရှားမှု ပုံစံတစ်မျိုးဟုသာ ကျွန်တော် နားလည်ထားသည်။ မှန်သည် မှားသည် ကျွန်တော် မပြောတတ်။ ကျွန်တော် ပြောလိုတာက ထိုကဲ့သို့ သူနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ စာပေရေးရာ ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့သော စာရေးဆရာ၊ ဝေဖန်ရေးဆရာများသည်လည်း သူ့ကို ဘယ်ခါမှ မမေ့လျော့ဘဲ လေးစားချစ်ခင် သတိရနေကြလိမ့်မည်ဆိုတာပင်။
သူ့ဝတ္ထုတွေထဲမှ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက `အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များ´ ဖြစ်ပြီး ယခင်ကထက် ကျွန်တော့်ကို အနုပညာအကြောင်း အဆင့်တက် နားလည်စေခဲ့သော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ `ပင်လယ်အတုထဲမှ ကျွန်း´လုံးချင်းစာအုပ်နောက်ပိုင်း သူ့လုံးချင်းစာအုပ်များကို ကျွန်တော် မဖတ်ဖြစ်တော့။ ဟိုအရင် သူ့လက်ရာများလောက် နောက်ပိုင်းစာအုပ်များအပေါ် ကျွန်တော် ရင်မခုန်တော့၍ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့နောက်မှ လူငယ်ထုသည် သူ့အနုပညာများကို အုံလိုက်ကျင်းလိုက် တပ်မက်ငြိတွယ်ဆဲပင်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသော်လည်း လုံးချင်းဝတ္ထုနှင့် အခြားစာများကို သူအဆက်မပြတ် ရေးသားနိုင်တာ တွေ့ရသည်။ သူ့ဘ၀၏ နောက်ပိုင်း အချိန်များတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်းသောကြောင့်ပဲလား၊ ကျွန်တော်ကပဲ သူ့ဆီက အနုပညာကို လောဘကြီးမိလို့လားမသိ၊ သူ့စာပေလက်ရာတွေက အရင်ကလောက် အနုပညာအား မပါတော့ဟု ထင်မိသည်။ ထိုအထင်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်မှန်း သူနှင့် ကိုဝေမှူး တွဲထွက်သော `ကြက်ခြေခတ်နှစ်ခု´ စာအုပ် အမှာစာတွင် ကိုရဲကြီးက သူ့အပေါ် မချိတင်ကဲ ကရုဏာဒေါသဖြင့် ရေးသားထားသည်များကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ပိုသေချာသွားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ အနုပညာအားနည်းသော ထိုနောက်ပိုင်း လက်ရာတချို့ကိုတောင် ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှ လူငယ်စာရေးဆရာများမှာ မှီအောင် ရေးသားနိုင်စွမ်းမရှိကြ။
ထိုသို့ဖြင့် သူနှင့်ကျွန်တော် တတိယအကြိမ် ဆုံကြပြန်သည်။ သည်တစ်ခါတော့ ဟိုအရင်အကြိမ်တွေနှင့် ကွဲပြားသွားသည်။ သူက ကွယ်လွန်ပြီးသူတစ်ယောက်အဖြစ် မှန်ခေါင်းတလားထဲမှနေ၍ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်သည်။ သူ့ဈာပနသည် နိုင်ငံရေးလောက၊ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတလောကမှ လူများဖြင့် အထူးစည်ကားခဲ့သည်။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း သူ့အကြောင်း လူတော်တော်များများက စာတွေရေးကြ၊ ကဗျာတွေ ဖွဲ့ကြသည်။ ထိုကာလက စာနယ်ဇင်းတစ်ခုမှ သူနှင့် စာအုပ် တွဲထုတ်ဖူးသူများကို သူ့အကြောင်း အမှတ်တရရေးသော စာမူများတောင်း၍ အထူးကဏ္ဍအဖြစ် ဖော်ပြကြရာ ကျွန်တော့်ဆီတော့ လာမတောင်းကြ။ မတောင်းတာကပဲ ခပ်ကောင်းကောင်း။ ကျွန်တော်က သူနှင့် စာအုပ်(၃)အုပ် တွဲထုတ်ဖူးသည်မှအပ သူနှင့် ကောင်းစွာ ခင်မင်သူမဟုတ်။ စင်စစ် သူ့ကို ညွှန်းဆိုသော ဘယ်စာမှ ဘယ်ကဗျာမှ သူ့ကိုမမှီ။ သူက တစ်ခေတ်မှာ တစ်ယောက်ဖြစ်လာသော စာပေပါရမီရှင်တစ်ယောက်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် သူ့လို ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာဖို့ မသေချာ။
ယနေ့ သူကွယ်လွန်သည့် (၂)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ပြင်ပမီဒီယာ တစ်ခုတွင် ဖော်ပြရန် စန်းမွန်အောင်မှ ကျွန်တော့်ဆီ တယ်လီဖုန်းဆက် စာမူ တောင်းလာသည်။ ထိုတယ်လီဖုန်း ၀င်လာစဉ်က `ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်း´အတွက် `ပင်လယ်များကို ဖြတ်သန်းခြင်း´ ဆောင်းပါးကို ကျွန်တော် ရေးသားနေချိန်ဖြစ်သည်။ စာပေအရှိန်အ၀ါ ကြီးမားသော မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှ တလေးတစား တောင်းဆိုသည့် အတွေ့အကြုံ ဆောင်းပါးဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ အချိန်ယူရေးဖို့လိုသည်။ ထို့အပြင် သူ့(၂)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာမူအတွက် စန်းမွန်အောင်က သန်ဘက်ခါ လိုချင်သည် အမြန်ရေးပေးပါဟု ဆိုလာတော့ ကျွန်တော့်မှာ စဉ်းစားရသည်။ ကျွန်တော်က ကွယ်လွန်ပြီးသော ကျွန်တော် လေးစားလောက်စရာ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် စကားလုံးများဖြင့် လူမြင်ကောင်းအောင် လွမ်းပြရတာမျိုး စိတ်မ၀င်စား။ ခက်တာက ကျွန်တော့်လို ဘာမဟုတ်သည့်ကောင်နှင့် စာအုပ်တွဲထွက်ခွင့် ပြုခဲ့သော သူ့အတွက် အမှတ်တရတစ်ခုခု ကျွန်တော် လုပ်ပေးချင်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ `ပင်လယ်များကို ဖြတ်သန်းခြင်း´ကို ခဏရပ်ကာ သူ့အကြောင်း ကျွန်တော်မြင်သည့်အတိုင်း ရေးသားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ လက်တွေ့မှာ သူ့အကြောင်း ဗြုန်းစားကြီး ချရေးဖို့ရာကျတော့ ကျွန်တော့်စိတ်က ချက်ချင်းမရဲ။ သို့ရာတွင် တကယ်တမ်း ချရေးလိုက်သောအခါ တော်တော်နှင့် ဖြတ်၍မရချင်။ သူ့အကြောင်းက ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာ နှစ်ကာလများစွာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နေရာယူပြီးထားသောကြောင့်ပဲလား မဆိုနိုင်။ ယခုတော့ ကျွန်တော့်မှာ သူနှင့်ပတ်သက်သမျှ ကုန်စင်သလောက် ရေးသားမိခြင်းဖြစ်ရာ နောက်နောင် သူ့အကြောင်း ထပ်မံရေးသားနိုင်ရန် မလွယ်ကူတော့။ ထို့အတွက်ကြောင့် လက်ရှိစာမူကို စန်းမွန်အောင်အပြင် အခြား သူ့အမှတ်တရ ထည့်သွင်းချင်သည့် မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်စောင်သို့လည်း ထပ်မံပေးပို့ရန် ကျွန်တော်က ဆုံးဖြတ်မိသည်။ သူ့ကို အသေအချာ လွမ်းဆွတ်နေဦးမည့် သူ့ပရိသတ်တစ်ဦးဦး ဖတ်မိသည်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော် ရေးရကျိုးနပ်နေပြီ။ သူ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ဟုလည်း ကျွန်တော်က လှိုက်လှဲစွာ တပါတည်း ဆန္ဒပြုမိသည်။ `အလင်းရောင် ၀တ်စုံသစ်ဖြင့် လာခဲ့သူသည် သူ့အလင်းတို့ကို ရုတ်သိမ်းလျက် ကမ္ဘာမြေမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာလေပြီ´ ဤစာသားမှာ သူ့ဈာပန ချသည့်နေ့က ဖြန့်ဝေသော လက်ကမ်းစာစောင်ပေါ်မှ သူ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ည ၀၉:၅၅ နာရီ
ယမမင်းရဲ့ သြ၀ါဒက ပြက္ခဒိန်တွေကို ဟောင်းမြစေရဲ့ ။
Idea , July 2003
မှတ်ချက်။ အထက်ပါ ကဗျာကို ပေးပို့သည့် ဘလော့ဂါ ကိုနေမိုးဝေအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ကိုတာရာမင်းဝေ ကွယ်လွန်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်တယ်။ အသိတစ်ယောက်ကတော့ နင်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့ ရေးရတာလဲလို့ မေးပါတယ်။ အခုခေတ်ပေါ် စာပေ ပြောင်းလဲမှုမှာ ကိုတာရာမင်းဝေဟာ အဓိကလူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုတာရာမင်းဝေရဲ့ စာပေလွှမ်းမိုးမှု အများကြီးကို ခံခဲ့ရတာပါ။ စာလုံးအနုအရွလေးတွေကို ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေထဲ ထည့်တဲ့နေရာမှာ ကိုတာရာမင်းဝေကို ဘယ်သူမှ မမှီဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကဗျာလေးကို ၂ ရက်တိတိ သေသေချာချာ စကားလုံးရွေးချယ် မုဒ်အပြည့်သွင်းပြီး အမှတ်တရ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (စကားမစပ် သူကွယ်လွန်သွားတာကို နေကြတ်တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရေးရလားလို့တော့ ပေါက်တတ်ကရတွေ မဝေဖန်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ)
မျက်လှည့်ဆရာ ပါးစပ်ထဲ မြိုချလိုက်သလိုမျိုး
ထိတ်ခနဲ လန့်ဖြန့်ပြီး ပြန်ငုံသွားရရှာတယ်
အားလုံးရဲ့ အကြည့်ဟာ ပျောက်ဆုံးသွားသောအရာ
တစ်သက်လုံး လင်းခဲ့သမျှ ခဏလေး အမှောင်ကျသွားခဲ့တာပါ
လှုပ်ရှားနေတဲ့ အရာတွေ တစ်ချိန်မှာ ရပ်တန့်သွားမယ်
ငြိမ်သက်နေတဲ့ အရာတွေလည်း တစ်ချိန်မှာ လူးလွန့်လာမယ်
ရနေတာတွေအားလုံး တစ်ချိန်မှာ ပျောက်ဆုံးပြီး
မရခဲ့သေးတာတွေအားလုံး တစ်ချိန်မှာ ပေါ်လာမယ်
ကမ္ဘာရဲ့ ဂြိုဟ်ရံလကို ခြုံလွှာလို အကာအကွယ်ယူပြီး
နေဟာ မြွေတစ်ကောင်လို အရေခွံလဲခဲ့ပြီ။
PS. ဒီကဗျာလေးကို မနော်ရဲ့ “အရှေ့မြို့ရိုးကနံနက်ခင်း” ဆိုတဲ့ ကဗျာပြပွဲလေးမှာလည်း သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုညီလင်းဆက်၏ ဘလော့မှ တဆင့် ခွင့်ပြုချက်အရ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Labels: ကဗျာ, နက္ခတ်ရစ်သမ်4comments
ဒီကဗျာတွေကတော့ ကိုရွှေဘုန်း(တာရာမင်းဝေ) မကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့ ကဗျာတွေပါ။ ဒီကဗျာတွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့စာအုပ်တိုက်ဖြစ်တဲ့ “ငါတို့စာပေ” မှထုတ်ဝေဖို့ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး စာပေစိစစ်ရေးက ခွင့်ပြုချက်လည်း ရထားပြီးပါပြီ။ စာအုပ်ထုတ်ခါနီးမှ မမျှော်လင့်ဘဲ “သူ” ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ ကွယ်လွန်ပြီးတော့မှ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မထုတ်ဖြစ်တော့တာပါ။ ဒါပေမယ့် online ပေါ်က ညီအစ်ကိုတွေအတွက် ဖတ်ရှုရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာစာအုပ်နာမည်ကတော့…. “နက္ခတ်ရစ်သမ်” တဲ့။
ခုချိန်ကစပြီး ကျုပ် ဗေဒင်ဆရာလုပ်မယ်
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဖြစ်ခဲ့တယ်
အိုဒက်ဆာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကြေးရုပ်နံဘေးမှာဖြစ်ခဲ့တယ်
ချုပ်ပလိုင်းထဲက ငါ မျှော်ရည်ငေးလင့်
မှော်ဆရာတိုင်း ကလို့ရတဲ့ ဓားပညာမဟုတ်ဘူး
အလင်္ကာတွေကိုလည်း ကိုယ်ကပဲ မှုတ်ငြိမ်းစားလိုက်ပါ့မယ်
တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ရဲ့ မီးအိမ်ဖြစ်ချင်ကြ
အခုတော့လည်း အားလုံး ဆုံးလျသွားပါပြီ
နက်ဖြန်ခါ သေသွားရင် ဘာဖြစ်မလဲလို့။
ဘ၀မှာ နေပျော်ရတာပါပဲ ကလေးရယ်။
ငါ ပျော်တယ်… ငါ့ဘာသာလည်း ပျော်တယ်
ဘယ်တော့မှ တစ်ကိုယ်တော် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်။
တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်က လင်းညိုခဲ့ပြီမို့လား
(အဲဒါကြောင့် ပိုဝေးတယ်လို့တောင် ထင်ကြရရဲ့)
ကိုယ့်ကို သတိရရင် ကဗျာလေးတွေ ရေးပါ
အေးလေ… မင်းလည်း တစ်ယောက်တည်းပါပဲ
အဖေ့အတွက် နိုင်ရာဝန်ကို ကူမပေးရင်း
ရေထဲက ငါးခုန်တက်လာတာလည်း ဖြစ်နိင်တယ်....
တစ်နေ့မှာ ငါ့အထ္ထုပ္ပတ္တိကို ငါဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်....
အထက်ပါကဗျာတွေအကုန်လုံး ဖတ်ပြီးသွားရင် သူ ကွယ်လွန်ခါနီး စိတ်အခြေအနေကို မှန်းဆနိုင်မှာပါ။ သူ့ နောက်ဆုံးနှစ်များမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူနဲ့ စာရေးဆရာတို့ ပြောသလို အလုပ်အကြောင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်အကြောင်းကို သူနဲ့ ကျွန်တော်ပြောရင် အလွန်ဆုံး နှစ်ခွန်းသုံးခွန်းတည်းပါ။ “ကျွန်တော် ဒီစာအုပ် ထုတ်ချင်တယ်”ဆိုရင် သူက “အေး… ထုတ်” “မထုတ်ပါနဲ့ကွာ” ဒီလောက်ပါပဲ။ စာမူခဆိုရင် တစ်ခါမှ ဘယ်ရွှေ့ဘယ်လောက်ပေးပါလို့ မတောင်းခဲ့ဘူးပါဘူး။
ထားပါတော့။ အဓိကပြောချင်တာက သူ့ကဗျာတွေပါ။ သူ့ရဲ့ soul ကို အထက်ပါကဗျာများထဲမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူ တောင့်တနေတဲ့ မိသားစုဘ၀၊ သူ လိုအပ်နေတဲ့ “မိသားစုဘ၀” သူ့ရဲ့ အထီးကျန်ရက်စွဲတွေကို့ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ကဗျာထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရသလို သူ့နှုတ်ကဖွင့်ဟပြောတဲ့ စကားတွေလည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သူ ကွယ်လွန်ခါနီးအချိန်မှာ သူ အရမ်း အထီးကျန်နေတယ် ဆိုတာပဲ။
အရမ်း နှမျောမိပါတယ်။ နေချင်ရင် အချိန်တွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ သူ လောကကြီးဆီက အများကြီး ယူသွားခဲ့ပြီး သူ့ဆီက လောကကြီးက နည်းနည်းပဲပြန်ရခဲ့တာ အရမ်းနစ်နာပါတယ်။ သူ့ကို အများကြီး ညှစ်လို့ရပါသေးတယ်။ သူ တစ်ခါပြောဖူးတဲ့ သူရေးချင်နေတဲ့ ငါးအုပ်တွဲဇာတ်ကြီးဆိုရင် အင်မတန် ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကလည်း အကြီးကြီးပါ။ ရေးမယ့်အကြောင်းကလည်း ရှယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်………………..ကိုရွှေဘုန်း………। ခင်ဗျားကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ပင်ပန်းလွန်းလို့ နောင်ဘ၀ အနုပညာရှင် မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
[ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ မထုတ်ဝေဖြစ်လိုက်တဲ့ “နက္ခတ်ရစ်သမ်” ကဗျာစာအုပ်ထဲက ကဗျာတွေကို ဆရာ့ရဲ့ အမှတ်တရဘလော့မှာ မျှဝေဖော်ပြဖို့ မိုးလှိုင်ညကနေတဆင့် ကြည်ဖြူစွာ ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကဗျာဆရာ မြေမှုန်လွင်ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ ဆိုရင် ဆရာတာရာမင်းဝေ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ၂ နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။]